छोराछोरीको स्याहार पाउनुपर्ने वृद्ध दम्पतीले छोराछोरीलाई नै स्याहार गर्नु परेपछि – Nepal Japan
नेपाल जापान ४ चैत्र १८:४७
भनिन्छ बूढेसकालमा बाबाआमाको सहारा छोराछोरी नै हुन्छन् र आमाबाबुले पनि आफ्ना सन्तानको पालनपोषणमा रत्तिभर कसर बाँकी राख्दैनन् । छोराछोरीले पनि बूढेसकालमा आमाबाबाको सहारा बनी उनीहरुप्रति आदर एवं सम्मान प्रकट गर्छन् तर छोराछोरी नै पूर्णरूपमा अशक्त भएपछि कसको के पो लाग्छ र ? यस्तै घटनाले पीडित छन् महोत्तरीका एक वृद्ध दम्पती ।
धनमायाले भन्नुभयो, “राति उठेर टर्च लिएर यिनीहरूको सेवा गर्छु, आमा हुँ, कसरी मर्न दिउँ ? मर्न दिन सक्दिनँ तर उपचार पनि गर्न सक्दिनँ ।” धनमायाले कटेरामा कोचिएका दुई सन्तान सुकुमाया र मानबहादुरलाई आफ्नै सारीले भए पनि ओढाएर राख्दैआउनुभएको छ ।
यस्तो दुःख कष्टपूर्ण जीवन र पारिवारिक अवस्था सबैले देखेको भए पनि कहीँकतैबाट केही सहयोग नपाएको उहाँहरुको गुनासो छ । दुवै सन्तान पूर्ण अशक्त भए पनि अहिलेसम्म अपाङ्गता परिचयपत्र उहाँहरूले बनाउन सक्नुभएको छैन । पशुझैँ दुई सन्तान कटेरामा राखेर पाल्दासमेत स्थानीय सरकारले नदेखेझैं गरेको दम्पतीको गुनासो छ ।